China Professional Kugadzira PP 4L Diki Plastiki Bhakiti muDhiramu / Mabhiramu / Pails fekitori nevatengesi | Dassaw
Nyanzvi Yekugadzira PP 4L Diki Plastiki Bhaketi muDrum / Barrel / Pails
Mashoko Mhandara PP
Divi (cm) (Wepamusoro dia * Kureba * Pasi dia) 18.6 * 17.9 * 16.4
Ukobvu (cm) 0.12
Kurema (g) 255g
Vhoriyamu 4 Liter
Muvharo Flat chivharo chepurasitiki chine misodzi-yadzima chisimbiso
Tine fekitori redu pachedu, zvikamu zvakatsiga mudura, tsigiro sampuro kugadzirisa uye kugadzira zvichiburitsa maererano nemuenzaniso wevatengi.
Kana iwe ukaona izvo zvinhu zvisingakwanise kushandiswa nekuda kwedambudziko remhando, tinogona kuzvitsiva mahara.
Zvese zvigadzirwa zvichaedzwa zvakanyatso kuvezwa kuti zvese zvakakwana mumamiriro.
Mapurasitiki emabhaketi anogona kuitwa nejekiseni kuumbwa kana kufuridza kuumbwa.Sezvo nezvakajairwa zvigadzirwa zvepurasitiki, chete mushure mekupurasitiki, jekiseni muforoma kuzadza, kutonhora, kuomesa uye kubvisa, bhakiti muviri jekiseni Kuumbwa kunogona kupedzwa. Sezvo kugadzirwa kwenzvimbo yedare kuri kuomarara, mapurasitiki emugomo anodhura pane emabhakiti esimbi.
Mashandisiro ekushandisa migomo:
(1) Zadza migomo nezvigadzirwa woisa kavha inoenderana pamuromo wedhiramu.
(2) Shandisa sando yerabha kurova pamucheto wechivharo chemabhaketi, vhara musono kusvika 10cm kureba, tenderera 180 madhigirii, ramba uchirova kumwe kumucheto kwechivharo chemabhaketi, mushure mekusvika pakureba kwakatarwa, tenderera uchitenderedza uye gogodza kudzamara chifukidziro nemabhakiti zvese zvasimbiswa.
(3) Kana yakavhurika, shandisa sikuruwa banga kuti utange iyo yekuisa chisimbiso uye kubvarura chengetedzo neringi.
(4) Tsika rutsoka rworudyi pakati pechivhariro chebhari, maoko maviri akabata ringi yekuchengetedza ichibvaruka, pamwe nedhiramu rakatenderedza kukwevera kumusoro, kusvikira ese avhurika.
Inogona kushandiswa zvakanyanya muindasitiri yemakemikari, kupfeka, mafuta ekuzora, glue, mukaka chena wakachena, ingi, gundi yekuvaka, chikafu, poda yekuwachisa, fetiraiza yemakemikari, mishonga yekuuraya zvipuka, mafuta nemamwe maindasitiri anoda kupurasitiki.
Bhakiti rakagadzirwa nemhando yepamusoro PP (polypropylene) zvinhu nejekiseni kuumbwa. Iyi bhagidhi repurasitiki rinotaridzika yakajeka uye yakachena, yakasimba simba, yakanaka chisimbiso; Ngura kuramba, kukwirira kumanikidza kuramba, kuchembera kuramba, yunifomu ukobvu, yakajeka ruvara, zvirinani kurongedza zvigadzirwa.
Pashure: 2.5L Yakakwirira Yemhando Yekudya Giredhi epurasitiki Bhakiti Barrel Pail
Zvadaro: Chinese Fekitori Chikafu Giredhi 5L epurasitiki maBuckets ane Logo Kudhinda
25L Plastiki Yakajeka Paint uye Lubricating Oiri
Kudhinda 18L Plastic Bhakiti 4.5 Gallon Paint Pa ...
Multi Chinangwa 1L yepamusoro chikafu giredhi plasti ...
Wholesale 20L Ruvara epurasitiki Paint Bhakiti / Pa ...
1L-25L Chikafu cheGiredhi epurasitiki Pails nePurasitiki Ha ...
Fekitori Mutengo Wepamusoro Hunhu 16L Plastiki Bhaketi